शीर्ष नि: शुल्क पुस्तकहरू, पढ्न र खजाना गर्न उत्कृष्ट कार्यहरूको एक संकलन | वर्तमान साहित्य
शीर्ष नि: शुल्क पुस्तकहरू
यद्यपि यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, आज यो वेबमा असंख्य नि: शुल्क पुस्तकहरू फेला पार्न सम्भव छ, दुबै प्रख्यात लेखकहरू, साथै ती व्यक्तिहरू जसले भर्खर मात्र साहित्य सुरू गर्दैछन्। निस्सन्देह, हाम्रो मनपर्ने लेखक द्वारा नवीनतम शीर्षक नि: शुल्क उपलब्ध हुनेछ, तर त्यहाँ असंख्य रोचक विकल्पहरू छन्।
त्यहाँ विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्महरू छन् - जस्तो कि अमेजन- तिनीहरूसँग कुनै लागत बिना कामहरूको उत्कृष्ट संग्रह छ, जसले विभिन्न साहित्यिक विधाहरू ढाक्छ। यो नोट गर्नुपर्दछ कि नि: शुल्क पुस्तकहरू उपलब्ध छन् ई-पुस्तकहरु, र त्यो अधिक केसमा यो संस्करणहरू प्राप्त गर्नका लागि दर्ता गर्न मात्र पर्याप्त छ। यहाँ यस क्षेत्रमा केहि विकल्पहरू छन्।
1 फोग र टूटेको क्रिस्टलका प्रभु (२०१))
2 द वुल्फको रिटर्न (२०१ 2014)
3 अलेक्स र बीईलाई चिन्ने: मेरो संगीत तपाईं हो (२०२०)
4 सेप्टेम्बर अन्त्य हुँदा मलाई उठाउनुहोस् (२०१))
5 निलो मून (२०१०)
6 नाथलीको एप्पल पाई (२०२०)
कोहरा र टुक्रिएको क्रिस्टलहरूका प्रभु (2015)
यो म्याड्रिडका लेखक César García Muñoz द्वारा बनाईएको, सस्पेंसले भरिएको एउटा काल्पनिक काम हो। यसको पहिलो संस्करण २०१ 2015 मा प्रकाशित भएको थियो र दुई अन्य पुस्तकले पूरक छs जसमा फोगको कारनामहरू टूटेको क्रिस्टलको राज्यमा जारी रहन्छ। निस्सन्देह, यो एक रमाईलो उपन्यास हो, जुन युवा पाठकहरूको उद्देश्य हो, तर एउटा हो जुन थ्रिलरका धेरै अनुयायीहरूलाई समात्न सक्दछ।
यो कथावस्तु शुरू हुन्छ जब एक अनौंठो व्यक्तिले दुई युवा महिलालाई एउटा पुरानो पुस्तक प्रदान गर्दछ, जसमा एक कल्पना संसारको कथा समावेश छ।। तिनीहरूले पढ्न सुरु गर्छन्, जहाँ हान्सको परिचय छ, जो सम्पूर्ण कथा बताउने आरोपमा चरित्र हो। अर्को, हान्सले एक जादुई संसारको जिप्सी केटा Niebla वर्णन गर्दछ, भनिन्छ: ब्रोकन क्रिस्टलको राज्य।
निब्लाको गोप्य मिशन छ र यसको लागि ऊ वास्तविक संसारमा जानुपर्दछ। त्यहाँ एक पटक, उनले दुई राम्रो साथी बनाउँछन् - ती मध्ये हान्स - जसको साथ उनी सुरक्षित हुनको लागि आफ्नो देश फर्कनु पर्छ। तर ब्रोकन क्रिस्टलको क्षेत्रमा केही गलत हुन जान्छ र तिनीहरूले त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्छ, किनकि तिनीहरू विभिन्न शत्रुहरू द्वारा पछ्याइएका छन्। लुक्नु महत्वपूर्ण छ कि साहसी बाँच्नको लागि।
कुहिरो र ... को स्वामी
यो वुल्फको फिर्ती (2014)
स्पेनिश फर्नांडो रुइडा यस रहस्य र जासुसी उपन्यासको लेखक हुन्, जसमा लेखक एक विशेषज्ञ हुन्। उनकोमा मुख्य पात्र माइकल लेजरजा, उर्फ ​​“एल लोबो” हो, जो एक स्पेनिश जासूस थिए। १ 70 s० को दशकमा, लेजरजाले आतंकवादी समूह ईटीएमा घुसपैठ गर्न र ठूलो प्रहार गर्न सफल भयो, 300०० भन्दा बढी सदस्यहरू पक्राउ गरे र स्पेनमा संगठनको संरचना भ breaking्ग गरे।
यो स्पेनमा उनको जासूस काम गरेको 30० बर्ष पछि, माइकल "एल लोबो" लेजरजाको बारेमा "काल्पनिक" कहानी हो। माइकल यस समय लुकिरहेको छ, बिभिन्न शारीरिक र मानसिक परिवर्तनहरूको माध्यमबाट जाँदैछ जुन उसलाई दिनदिनै बढी असर गर्दछ। अभिभूत त्यसकारण चरित्र लुकाउनुहोस् दुबई यात्रा, जहाँ उनी एक अल कायदा सेल को भाग को निर्णय।
लेजरजा करीम तमुजको साथी हो, जो उनीलाई आतंकवादी संगठनमा परिचित गराउँदछन्। समानान्तर, सीआईएले काम गर्ने एजेन्ट सामन्था लम्बर्टलाई अल कायदाको अन्त्य गर्ने. एला, घुसपैठ पछि, उनी आफ्नो सहयोगको लागि एल लोबोको नजिक जान्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा, उनले उनलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरे, यद्यपि दुबै पक्षले नयाँ आतंकवादी हमलाको बारेमा थाहा पाएपछि change / ११ को घटनाभन्दा बढी अत्याचारी हुनेछ।
बैठक एलेक्स र बीई: मेरो संगीत तपाईं हो (2020)
यो उपन्यास रोमान्टिक कथा हो र ईारा एम। सलाद्रिगस द्वारा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो, साहित्यको यस विधाको विशेषज्ञ, जो तारारागोनाका स्थानीय हुन्। मेरो संगीत तपाईं हो यसको दुई मुख्य पात्रहरूमा आधारित छोटो कथा छ: बीई र एलेक्स।
बे र इलेक्स सामाजिक नेटवर्कको माध्यमबाट साथी बन्छन्। दुबैको जीवन फरक छ, तर कलासँग सम्बन्धित। बीवा एक ब्याले डान्सर हो र एलेक्स एक गायक हो जसले सफल हुन खोज्छ। एक समय पछि, तिनीहरू एकैसाथ मिलेर र व्यक्तिगत रूपमा एक अर्कोमा भेट्दछन्, मैले पाएँ कि यो दुस्खायो र ती दुवैमा धेरै भावना जगायो।
एलेक्सको क्यारियर बढ्दै जाँदा, बीई तिनीहरूको सम्बन्धले लिइरहेको स्वरले डोर्यायो र आफूलाई टाढाबाट समाप्त गर्दै। वर्षौंपछि, बीईलाई अलेक्सले सम्पर्क गरे, जो अब एक सेलिब्रिटी हो; उनी विपरित, सम्बन्ध विच्छेद पछि र एक छोरी संग, उनको वास्तविकता मा अडिग रहन्छ। दुबैको जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आउँदछन्, र पुनर्मिलन हुँदा, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी र संगीत आफ्नो काम गर्छन्।
बैठक अलेक्स र बीई: ...
भदौ सिद्धियपछि मलाई उठाउनुहोस (2019)
यो एक छ कालो उपन्यास मोनिका रुआनेट द्वारा लेखिएको। भदौ सिद्धियपछि मलाई उठाउनुहोस यो इ England्ल्यान्ड र भ्यालेन्सियन अल्बुफेरा बीच सेट गरिएको छ। कथा यसको मुख्य पात्र: Amparo द्वारा वर्णन गरिएको छ। जब उनी आफ्नो पतिको घाटाबाट गुज्रिरहेकी छिन्, उनलाई आकस्मिक अवस्थामा उनको छोरो टोएटेले सम्पर्क गरी।
आमपारो अल्बुफेरा डे भ्यालेन्सियाको सानो शहरमा बस्छिन्, जहाँ उनी एक बर्ष भन्दा बढी समयदेखि आफ्नो पति एन्टोनियोको मृत्युबाट गुज्रिरहेकी छिन्।। उसको शारिरीक बेपत्ता हुनु सधैं रहस्य नै थियो, किनकि उसको सम्पत्तीमा रगतका निशानहरू मात्र भेटिए, तर उनको शरीर भने कहिले पाएन। यस रहस्यमय मामलाको बारे शहरमा धेरै कुरा छ र तिनीहरू एन्टोनियोको मृत्युको बारेमा विभिन्न धारणा छन्।
अरु जस्तो सामान्य दिनमा, आमारोले इ England्ल्याण्डमा बस्ने उनको छोरा टोएटेबाट एक जरुरी सन्देश प्राप्त गर्दछन्। तुरुन्तै, उनी, जस्तो अर्को आमाले, आफ्नो छोरालाई मद्दत गर्न गइन्। अ country्ग्रेजी मुलुकमा हुँदा, आमारोले उनलाई फेला पार्न सक्दैन: ठिटो हराएको छ। महिला, एक अन्वेषक बिना, छाडा टाउको बाँध्नु पर्छ यो पत्ता लगाउन ... प्रक्रियामा तपाईले कडा भेट्टाउनुहुनेछ रहस्य, तीमध्ये कतिपयले उनका पति एन्टोनियोसँग सम्बद्ध पनि गरे।
मैले काम सकेपछि मलाई उठाउनुहोस् ...
निलो मून (2010)
२०१ Bar मा प्रस्तुत बार्सिलोनाका मूल निवासी स्पेनिश फ्रान्सीन जापाटरले निलो मून, केहि कल्पनासँग रोमान्टिक कथा। यस खेलमा दुई मुख्य पात्रहरू छन्: एस्टेला प्रेस्टन र एरिक वालेस। यो एक क्लासिक युवा प्रेम हो, तर विवरणको साथ यसले यसलाई केही फरक बनाउँछ। उनको सफलता अतुलनीय छ, उनले पहिलो स्थान प्राप्त गरे अमेजन किन्डल युवा ,40.000०,००० भन्दा बढी दृश्यको साथ।
एस्टेला एकदम शान्त युवती हुन् जसले आफ्नो अध्ययनको मात्र ख्याल राख्छिन्, यस्तो अवस्था एरिकको आगमनसँगै परिवर्तन हुन्छ, एक सुन्दर नयाँ एक्सचेन्ज विद्यार्थी, जसले उनलाई मोहित गर्ने व्यवस्था गर्दछ। जब उनीहरूको प्रेम कहानी उजागर हुन्छ, अन्य गाह्रो परिस्थितिहरू एस्टेलाको लागि झल्किन्छ, किनकि एरिकले उनको रहस्यमय जीवनलाई जटिल बनाउने एउटा गोप्य रहस्य राख्दछ।
नथालीको एप्पल पाई (2020)
यो स्पेनी लेखक कार्ला मोन्टेरोको छोटो कथा हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि वर्षहरूमा सेन्ट मार्टिन सुर मेयू भनिने सानो शहरमा यो कथानक सेट गरिएको छ। कथा तथाकथितको अनुभवबाट प्रेरित हुन्छ "Boctes को bâtards", जर्मन सेनाका साथ फ्रान्सेली केटीहरूको मिलनको परिणाम स्वरूप जन्मेका बच्चाहरू।
नेथाली सेन्ट मार्टिन सुर मेउको सानो शहरको पाटिसरी मैसन क्याफेको जवान मालिक हुन्। परिवारको परम्परा अनुसरण गर्दै, उनले आफूलाई पेस्ट्रीमा समर्पित गरिन्। स्थानीय व्यक्ति दिनचर्याको लागि प्रयोग गरिन्छ, र नायकले तयारी गरेको स्याउ पाई क्षेत्रको मनपर्दो परम्परा हो।
अर्कोतर्फ पॉल, एक जर्मन मानिस जो एक जर्मन लेफ्टिनेन्ट र एक जवान फ्रेन्च महिलाको बीच गुप्त प्रेमबाट जन्मेका थिए। सामाजिक वजनको कारणले कि एक नाजी अफिसरको हरामी छोरा हो भन्ने बुझिन्छ -un Bâtard de Boches-, केटा भाग्न निर्णय। यद्यपि तिनीहरूको यात्राको बखत, el शानदार स्याउ पाईको गन्धले उसलाई नाथलीको क्याफेमा लग्यो.
त्यहाँ, दुबै आँखा पहिलो पटक भेट्छन् र मोहित हुन्छन्। त्यस क्षणदेखि नै, एउटा गहन प्रेम कथा सुरू हुन्छ जसले पावलको बाँच्ने इच्छालाई पुनर्स्थापित गर्दछ र जवान प्यास्ट्री शेफको जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दछ।
को एप्पल पाई ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » शीर्ष नि: शुल्क पुस्तकहरू
संसारको सबै भन्दा राम्रो पुस्तक
लियोन फिलिप। उनको जन्मदिन मा कविताको चयन